Angano Info. About. What's This?
Atlasy dia titàna aminny angano grika. Araka ny angano grika, dia voaheloki Zeosy hibaby ny lanitra aminny sisiny andrefanizao tontolo izao aminny sorony mandrakizay izy. Niova ny tantara taty aoriana ary lazaina fa mibaby ny bolantany izy.
Ny Vatravatra dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny Asotry no eo alohany ary ny Hatsiha no eo aoriany. Na dia mampiasa teny mitovy na mitovitovy aza ny isam-paritra dia mety samihafa ny fari-potoana ao aminny taona tondroina aminio teny io arakaraka ny faritra eto Madagasikara. Araka ani Jaovelo-Djao dia misy manao hevitenim-bahoaka ka mandika ny hoe Vatravatra aminny Adaoro merina; volanny orambaratra ny Vatravatra. Volana voalohany ny Vatravatra aminny Antesaka sy ny Antanosy, faha-12 aminny Bara, fafa-2 aminny Bezanozano, faha-11 aminny Sihanaka.
Ny Agadà na Hagadà dia ireo fampianarana araka ny lovantsofina jiosy tsy momba ny lalàna ary ny literatiora mirakitra anireo fampianarana ireo. Ao aminizany literatiora izany dia ahitana fitantarana, angano, fedrà, toriteny, sombin-tantara, fananarana ara-pitodran-tena na torohevitra azo ampiharina aminny lafim-piainana andavanandro. Ao aminny Talmoda sy ao aminny fanangonan-dahatsoratra atao hoe Midrasa agada no tena ahitana ny agadà, ka ny tena fantatra indrindra dia ny Midrasa Raba. Ahitana agadà koa ny ao aminny soratra tsy nataonny raby toy ny literatiora apokaliptika sy jodeo-helenis ...
Ny Pleiada dia anarana iantsoana ireo zanaka vavy fitonny Titàna Atlasy sy ny Okeanisa Pleionê. Antsoina aminny teny grika hoe Πλειάδες / Pleiádes izy ireo. Avy aminny anaran-dreninizy ireo no nahazoana io anarana iombonany io. Izao avy ny anaranireo Pleiada tsirairay araka ny fizokiany: Kelaino grika: Κελαινό / Kelainó; Asteropê na Steropê grika: Στερόπη / Sterόpê na Ἀστερόπη / Asterόpê; Elektra grika: Ἠλέκτρα / Êléktra; Meropê grika: Μερόπη / Μerόpê. Taigetê grika: Ταϋγέτη / Taügétê; Alkionê grika: Ἁλκυόνη / Αlkuónē; Maia grika: Μαῖα / Maĩa; Aminny sehatry ny haikintana dia antokon-kinta ...
Ny Ούκκο dia asteroid ny Tena Fehin-kibo Asteroids aminny fahazavana 11.33. Izany dia hita taminny 1936 ny zavatra astronoma Y. Väisälä, izay nahita avy any Turku any Finland, ary naka ny anarany avy ny eponymous antampony ny maha-andriamanitra ny zavatra angano.
Ny fanahy, araka ny karazam-pinoana sy fivavahana maro, dia zavatra manan-tsitrapo nefa tsy azo tsapain-tanana, izay mety ho hitanny maso indraindray, ka heverina fa manana hery tsy araka ny mahazatra, sady mety hampianjady ny hery sy ny fahefany aminny tontolo tsapa. Fanahy, ohatra, ny fanahinny olona maty, ny demony, ny andriamanitra, ny matoatoa, ny anjely, sns. Maro ireo taranja sy sehatra andinihana sy iresahana ny fanahy, ka isanizany ny fivavahana, ny teôlôjia, ny finoana, ny angano, ny fomban-drazana, ny fanaovana mazia.
Ny Amalekita dia foko mpifindrafindra toerana resahina ao aminny Baiboly, taranaki Amaleka, izay nivelona tany aminny tapany atsimoni Jodea, eo anelanelani Idomea sy ny tany efitri Sinay any Egipta. Araka ny Baiboly dia niady matetika taminny Israelita izay nihevitra azy ho foko voaozona izay ireo. Nandidy ani Saoly Andriamanitra mba handringana ny Amalekita ka niady taminizy ireo sady nandresy azy ireo ny Israelita nefa tsy namono ani Agaga mpanjakanny Amalekita i Saoly. Izany tsy fanajana ny baikonAndriamanitra izany no nahatonga ny fahataperanny maha mpanjaka ani Saoly ka i Davida no vo ...
Ny Baiboly dia boky inoanny Kristiana sy ny Jiosy fa Soratra Masina mirakitra ny tenin Andriamanitra. Ny Baibolinny Jiosy na Baiboly hebreo, izay tsy ahitana afa-tsy ny Testamenta Taloha, dia atao hoe Tanakh. Mizara roa lehibe ny Baiboly kristiana ka ny fizaràna voalohany, izay fitambaranireo boky voasoratra talohani Jesoa Kristy, dia atao hoe Testamenta Taloha, fa ny fizaràna faharoa kosa, izay fitambaranireo boky voasoratra taorianny nahaterahani Jesoa Kristy, dia atao hoe Testamenta Vaovao. Ny fiangonana tsirairay dia mety hampiditra aminny fomba samy hafa ny boky ao aminny Baiboly.
Ny hainteny na hain-teny dia sokajin-dahabolana malagasy izay hita indrindra ao aminny Merina, izay miendrika tononkalo fohy iresahana zava-madinika aloha, avy eo mankany aminny tena lohahevitra, ka aminny alalanny fampifandraisana aminny fomba kanto ny voanteny araka ny endriny na ny heviny no ahatongavana aminizany. Ny lohahevitra dia matetika momba ny fitiavana. Azo heverina ho mitovitovy aminny pantun maley ny hainteny, ka azo atao ny manatsoa-kevitra fa fomba fanaovana lahabolana teo aminny Malaiô-pôlineziana efa hatry ny ela izany ary tafiditra teto Madagasikara taminny fifindrà-moni ...
Ahasoerosy na Asoerosy dia anaran olona hita ao amin ny Baiboly. Heverinny maro fa mitovy aminny anarana hoe Kserksesy ny hoe Ahasoerosy na Asoerosy noho izy avy amin ny anarana aminny teny persiana tranainy hoe Khšayarša. Tsy vitsy koa anefa ireo mihevitra fa mitovy amin ny anarana hoe Artakserksesy ny hoe Ahasoerosy. Amin ny teny hebreo dia atao hoe אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ / Aʾhashwerosh na Aʾhashverosh io anarana io. Ireto avy ireo olona nitondra io anarana io: Misy Ahasoerosy na Asoerosy hafa koa ao aminny Bokini Tobia, mpiara-miasa amini Nabokôdônôzôra na Nebokadnezara, izay misy mihevitra fa ...
Ny Midrasa dia lahateny na lahatsoratra nataonireo raby ivoasany ny Torah mba hanazavana ireo zavatra momba ny lalàna na ny fitondran-tena. Ny tanjonny fanaovana midrasa dia ny hanazava ny hevi-dalina izay miafina ao ambadiky ny hevitra ara-bakiteninny Baiboly. Anangonana ny fivoasana nataonny raby maro ny aminny lalàna sy ny fomba amam-panao resahina ao aminny Soratra Masina ny Midrasa. Maro ny Midrasa voasoratra ka naharitra taonjato folo no nanaovana izany. Ny midrasa dia natao am-bava aloha vao izay noraiketina an-tsoratra taty aoriana. Ny midrasa koa dia ireo boky mirakitra izany fivo ...
Ny angano dia fitantarana zavatra tsy nisy nefa namboarina ho toy ny nisy ary natao hanatsoahana fananarana, na fitantarana zava-nitranga tokoa. Karazana lahabolana tsotra, lava ary miendrika tantara foronina noho ireo dingana hita ao anatiny sy ny mpandray anjara ary ny olana sy ny vahaolana hita taratra ao aminny tantara ny angano.
1. Ny angano malagasy
Manana hevitra manokana ny teny malagasy hoe angano, tsy azo ampitovina fotsiny aminny teny frantsay hoe conte na mythe satria ireo tsy mitovy dika aminy. Ny "conte" dia entina manazava ny fiainanolombelona avy aminny fanoharana azy aminny samy olombelona na aminny zavaboaary hafa. Matetika aminizany dia misy lohateny vahavahana mandritra ny angano iray manontolo. Ohatra: "Ny tanalahy sy ny lambo". Ny fedrà "mythe" dia karazana angano fiandohana na anganom-piforonana. Ohatra: "Ifara sy Trimobe".
1.1. Ny angano malagasy Ny angano teo aminny Ntaolo
Ny Ntaolo dia nanabe ireo taranany taminny alalanny fitantarana angano aminny hariva. Isaky ny maheno angano ny ankizy dia manatsoaka lesona, mahalala zava-baovao momba ny fiainana.
1.2. Ny angano malagasy Ny angano ankehitriny
Ankehitriny dia mila tsy hananana ny anjara toerana notanany taloha ny angano noho ny fisianny fitaovana vokatry ny teknolojia vaovao toy ny sary miaina sy ny kilalao elektrônka. Tantaraina am-bava ny angano taminny andro taloha fa ankehitriny dia maro ny voasoratra am-boky. Ankehitriny dia tsy mahavatra mitantara angano aminny zanany na ny zafikeliny na ny mpianany ny ray aman-dreny sy ny raibe na renibe ary ny mpampianatra.
1.3. Ny angano malagasy Tanjonny fitantarana angano
Fitaovana ahafahana manabe sy manefy ny maha olona ny olona ny angano. Mahatonga ny ankizy haharesy ny tahotra ao aminy sady ahazoanhy fanazavana tsotra momba ny fianana ny angano. Ahafahanny ankizy mizatra ireo lohahevitra lehibe toy ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fomba amam-panao, ny fahasahiana sy ny hakanosana, ny fahantrana sy ny fananan-karena, ny tsara sy ny ratsy. Ny angano dia mitondra fahalalana momba ny teny sy ny fiteny satria heno ao daholo ireo voanteny tsy faheno andavanandro. Fitaovam-pampianarana ny angano noho izy afaka mampahatsiahy ny zava-nitranga taminny fotoana lasa. Mandefa ny fisainana any aminny lasa ny angano.
Ny Pleiada dia anarana iantsoana ireo zanaka vavy fiton ny Titàna Atlasy sy ny Okeanisa Pleionê Ὠκεανίς Ôkeanís Πληιόνη Plêiónê Antsoina amin ny
ny anarany avy ny eponymous antampony ny maha - andriamanitra ny zavatra angano Ny eo ho eo ny savaivony ny Ukko tombanana ho 21, 52 km. O nanome karazana
iresahana ny fanahy, ka isan izany ny fivavahana, ny teôlôjia, ny finoana, ny angano ny fomban - drazana, ny fanaovana mazia. Ny fanahin ny vatana dia fanahy
Hamàna zanak i Hamedata taranak i Agaga mpanjakan ny Amalekita. Araka ny angano arabo talohan ny niforonan ny fivavahana silamo dia isan ireo firenena arabo
p. thèse Robert Jaovelo - Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar : Angano Joro et Tromba, Sakalava, Ed. Ambozontany, Antanarivo Karthala, Paris
fitovizan - kevitra no mamorona ny atao hoe Halakà hebreo: ה ל כ ה Halakha ary ny angano sy fitantarana madinika ampiasaina ho enti - manome ohatra momba ny lalàna
manokana ny tsangan asany betsaka ho an ny ankizy anisan izany ny fitantarana angano famoronana kilalao ho an ny ankizy Nahafantaran ny Olona azy ny tononkira
ny anaran ireo mpirahavavy fito ary ny ray aman - dreniny. Ny hazavan izy ireo dia eo anelanelan ny 2, 86 sy 5, 44 izany hoe hita maso. Pleiada angano
Aleksandria tamin ny taonjato faha - 3 tal. J.K. Araka ny tantara miendrika angano notaterin ny Tararasin i Arstea izay nitombo miandalana hatramin izay. Ny
Snow White and the Seven Dwarfs (horonantsary, 1937)
Snow White and the Seven Dwarfs dia klasika Disney voalohany indrindra, niseho voalohany taminny 21 desambra 1937 tao aminny Carthay Circle Theater. Ity sarimihetsika ity dia nalaina avy aminilay angano mitovy lohateny aminy, nosoratan-dry Grimm mirahalahy taminny 1812. Anisanny nanome aina ny tantara ry Adriana Caselotti, Lucille La Verne, Pinto Colvig, Roy Atwell, ary i Otis Harlan.
Pinocchio (horonantsary, 1940)
Pinocchio dia sarimihetsika faharoa nataonny studio Disney, nivoaka taminny taona 7 febroary 1940, nalaina avy taminny angano Avventure di Pinocchio, storia di un burattino nosorataini Carlo Collodi taminny taona 1881. Mandray anjara aminio sarimihetsika io ireo mpilalao malaza toa ani Cliff Edwards, Dickie Jones, Christian Rub, Mel Blanc, Walter Catlett, Charles Judels, Evelyn Venable, ary i Frankie Darro.